Posted by ကိုထွန်း at 02:33 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 21:24 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 23:02 No comments:
"Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler နဲ့ Boiler Feed Water"
water drum ဆိုတဲ့ pressure vessel အတွင်းမှ၊ "ရေ" level ကို အလွယ်တကူ 'ကြည့်' နိုင်စေရန်၊ sight glass (၂) ခုကို၊ drum ဘေးတဖက်တချက်စီမှာ၊ အလျှားလိုက်အပြိုင် vertically installed အနေအထားဖြင့် တတ်ဆင်ထားကြ ပါတယ်။ sight glass arrangement နဲ့ water drum ကို၊ tube ပိုက် အသေးစားလေးဖြင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့အတွက်၊ drum အတွင်းမှ၊ "ရေ" level ဟာ၊ dumping function ဖြင့်၊ ဘောင်ဘင်ခတ်ကာ၊ လှုပ်ရှားခဲ့လျှင်လည်း၊ sight glass မှာ fluctuated ဆိုတဲ့ လှုပ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပေါါမှု နည်းပါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ "ရေ" level ကို 'တိုင်းတာ' ရာမှာတော့ differential pressure transmitter, float နဲ့ level prob လို့ခေါါတဲ့ conductivity or capacitance prob တွေကို၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
သဘေ်ာမှာသုံးတဲ့ "Marine Boiler" တွေရဲ့ water drum level ဟာ၊ လှိုင်းလေဒါဏ်ကြောင့် "Industrial Boiler" တွေထက်ပိုပြီး၊ fluctuated ဖြစ်လွယ် ပါတယ်။ အမှန်တကယ် actual low level ဖြစ်ပေါါမှုသေခြာစေရန်၊ စက္ကန့် (၃၀) ခန့် time delay ထားပြီး၊ အချိန်ဆိုင်းကာ alarm ကို activated ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့ boiler တွေမှာတော့ water drum ရဲ့ တဖက်တချက်စီမှာ level electrode တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Water level difference in the gauge glass
boiler ကို စတင်မီးထိုးတဲ့အခါ၊ steam outlet line ကိုပိတ်ထားပြီး၊ pressure vessel ထဲမှာအလိုရှိတဲ့ steam pressure ရလာမှသာ၊ ပြန်ဖွင့်ရပါတယ်။ မီးစတင် ထိုးကာစမှာ low steam pressure အခြေအနေဖြစ်ပေါါနေပြီး၊ pressure vessel မှာ air bubbles တွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ water level sight glass နဲ့ water drum ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ tube ရဲ့ inner heat transfer media ဟာ၊ "လေ" ဖြစ်ပြီး၊ air bubbles တွေကြောင့် tube မှာ အပူချိန်လွန်ကဲမှု over heated ပေါါပေါက်ကာ၊ deformed အနေနဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
tube ရဲ့ over heat limit ဟာ၊ (250 ° C.) ခန့်ရှိပါတယ်။ steam pressure5kg/ cm2 ခန့်မှာ ဖြစ်ပေါါတဲ့ air bubble ပမာဏဟာသေးငယ်ပါတယ်။ water level အပေါါမှာ Pressure 5kg/ cm2 ရှိနေတဲ့အတွက်၊ bubble ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ level fluctuated condition ကို၊ လျစ်လျူရှူနိုင်ပါတယ်။
Fig. Water level sight glass
steam pressure5Kg/ cm2 ကြောင့် sight glass ရဲ့ upper section မှာ5Kg/ cm2 ရှိနေပြီး၊ lower section မှာတော့5kg/ cm2 + water level = (5kg/ cm2 + 1000 mmH2O) ရှိပါတယ်။ sight glass ရဲ့ upper section နဲ့ lower section တို့ရဲ့ pressure differential ဟာ water level ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ sight glass ရဲ့ lower sensing point ဟာ၊ water drum base ရဲ့အထက် 500 mm မှာ ရှိခဲ့လျှင် actual water level ဟာ (1000 mm + 500 mm ) = 1500 mm ဖြစ်ပါတယ်။
boiler feed water ဟာ system အတွင်းမှာ states များပြောင်းလဲကာ၊ circulating ကိုဆောင်ရွက်နေပြီးအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် impurities ဆိုတဲ့၊ ရေမှာပျော်ဝင်နေမယ့် အရာဝထ္ထုတွေနဲ့ undissolved solids ဆိုတဲ့၊ ရေမှာ မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အစိုင်အခဲတွေ ရောနှော ပါဝင်နေပါတယ်။ impurities တွေကို ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ oxygen, carbon dioxide နဲ့ ammonia လို dissolved gas များ၊ carbonate နဲ့ bicarbonate hydroxide content တွေဖြစ်တဲ့ acidity သို့မဟုတ် alkalinity များ၊ calcium နဲ့ magnesium salts တွေဖြစ်တဲ့ hardness များ၊ steam ကို condenser မှာအအေးခံတဲ့အခါ condenser tube တွေမှတဆင့်၊ sea water ထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွက်၊ အကြောင်းတခုခုကြောင့် sea water ingress ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ရေ စိမ့်ဝင်ရောနှောမှုကနေ၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ chlorine content များနဲ့ boiler feed water ကိုပုံမှန်၊ blow down မလုပ်ပဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုမှုကြောင့် 'အနယ်' အဖြစ်၊ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ impurities များဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ်။
impurities တွေနဲ့ undissolved solids တွေဟာ boiler ရဲ့ internal parts တွေဖြစ်တဲ့၊ tubes တွေနဲ့ internal fittings တွေမှာ scale နဲ့ corrosion တွေ၊ ဖြစ်ပေါါစေတတ်ပါတယ်။ boiler feed water ဆိုတဲ့ boiler သုံးရေမှာပျော်ဝင်နေလေ့ရှိတဲ့ impurities တွေကတော့၊ calcium carbonate, calcium bicarbonate, calcium sulphate, calcium chloride, magnesium carbonate, magnesium bicarbonate, magnesium sulphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydroxide, sodium sulphate နဲ့ silicon dioxide တို့ဖြစ်ပါတယ်။
calcium carbonate, magnesium carbonate နဲ့ magnesium bicarbonate စတဲ့ impurities တွေဟာ၊ soft scale ကိုဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ calcium bicarbonate ကတော့ soft scale သာမက၊ carbon dioxide ကိုပါဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ calcium sulphate နဲ့ silicon dioxide ဟာ hard scale ကို၊ ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ calcium chloride, magnesium sulphate နဲ့ magnesium bicarbonate တို့ကတော့ corrosion ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
sodium chloride ဟာ၊ electrolysis ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ sodium carbonate, sodium sulphate နဲ့ sodium hydroxide ကတော့ alkalinity ကို ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ sodium bicarbonate ဟာ၊ foaming ဆိုတဲ့ အမြှုတ်တွေဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ alkaline သို့မဟုတ် temporary hardness ဟာ CO2 နဲ့ H2O ပေါင်းစပ်ရာမှ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့၊ carbonate acid နဲ့ calcium carbonate တွေပေါင်းစပ်ရာမှ ပေါါပေါက်လာတဲ့ calcium bicarbonate တို့မှတဆင့်၊ ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။
တဖန် boiler feed water ထဲမှ၊ alkaline သို့မဟုတ် temporary hardness ဟာ အပူပေးခံရတဲ့အခါ၊ calcium carbonate နဲ့ ရေ အဖြစ်ပြိုကွဲသလို၊ magnesium bicarbonate ဟာလည်း၊ အပူပေးခံရတဲ့ အခါ၊ magnesium carbonate နဲ့ ရေ အဖြစ်ပြိုကွဲပြီး၊ non-alkaline သို့မဟုတ် permanent hardness ဆိုတဲ့ Scale + Carbonic Acid ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ alkaline သို့မဟုတ် temporary hardness နဲ့ non-alkaline သို့မဟုတ် permanent hardness တို့ ပေါင်းစပ်ရာမှ၊ total hardness ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။
boiler feed water အတွင်းမှ၊ sodium bicarbonate ဟာ၊ အပူပေးစဉ် sodium carbonate, CO2 နဲ့ H2O အဖြစ် ပြိုကွဲသွားပါတယ်။ ပြိုကွဲသွားတဲ့ sodium carbonate နဲ့ H2O တို့ဟာ၊ အပူပေးစဉ် sodium hydroxide နဲ့ CO2 ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ non-scale forming salts တွေအဖြစ်၊ ပေါါပေါက် လာပါတယ်။ အပူပေးနေတဲ့ heating process အတွင်း၊ non-scale forming salts တွေနဲ့ total hardness တို့ပေါင်းစပ်သွားကာ၊ TDS ဆိုတဲ့ total dissolves solids များအဖြစ်၊ ဖွဲ့စည်း ပေါါပေါက်လာပါတယ်။
boiler ရဲ့ internal parts တွေမှာ scale နဲ့ corrosion များဖြစ်ပေါါခြင်းမှ တားဆီး ကာကွယ်ရန်၊ boiler water testing treatment တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ boiler မီးထိုးရာမှရရှိလာတဲ့ super heated steam တနည်းအားဖြင့် dry steam ဟာ၊ states အမျိုးမျိုးဖြတ်သန်းပြီး၊ condenser မှာ condensate အနေနဲ့ 'ငွေ့ရည်' စုဖွဲ့စဉ်၊ steam တွေလည်း ရောနှောပါဝင်နေသေးတဲ့အတွက် de-aerator Tank သို့မဟုတ် cascade tank မှာထပ်မံပြီး၊ condensate ဖြစ်စေပါတယ်။ cascade tank မှာ condensate ဖြစ်ပြီးမှ၊ 'ရေ' အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ boiler feed water ကို၊ sample ယူတဲ့အခါ၊ (25ံC.) ခန့် အပူချိန်ရှိတဲ့ နမူနာရေ boiler sample water ဟာ၊ စမ်းသတ်ရန်အတွက် အကောင်း ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
'Dissolved oxygen' - ဆိုတဲ့ oxygen ပါဝင်မှု တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းကို 'Indigo Carmine Method' လို့ခေါါဆိုပြီး၊ oxygen analyzer ကဲ့သို့၊ testing equipment တွေတိုင်းတာ စစ်ဆေးနိုင်သလို၊ carmine သုတ်လိမ်းထားတဲ့ strip အချောင်းလေးတွေကို၊ နမူနာရေ boiler sample water ထဲမှာ၊ နှစ်ကြည့်ပြီး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှုအား reference အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဇယားမှာ၊ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့လည်း၊ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
'Alkalinity' - ပါဝင်မှု အချိုးအစားကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ 'Litmus papers' စက္ကူစလေးတွေကို၊ နမူနာရေထဲမှာ နှစ်ကြည့်ပြီး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာမှ၊ electronic instrument ဖြစ်တဲ့၊ hand-held conductivity meter တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ ပိုမိုတိကျစွာ တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်လာပါတယ်။ hand-held conductivity meter ကို အသုံးပြုပြီး၊ တိကျတဲ့ pH level ကို တိုင်းတာနိုင်စေရန်၊ buffer liquids တမျိုးကိုအသုံးပြုပြီး၊ calibrated အနေနဲ့ ချိန်ညှိပြီးမှ၊ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Fig. closed loop electronic TDS control system
'TDS' - ဆိုတဲ့ total dissolved solids တွေပါဝင်မှုကို၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ နည်းလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေါါတ်မှာတော့ boiler water အတွင်း၊ ရောနှော ပါဝင်နေတဲ့ dissolved minerals တွေနဲ့ salts တွေရဲ့ conductivity ကိုတိုင်းတာပြီး၊ ppm ဆိုတဲ့ pulse per million အချိုးအစားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ electronic instrument တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
'Dissolved gas of Oxygen and CO2' - ပုံမှန်အားဖြင့် de-aerator tank သို့မဟုတ် cascade tank မှာ၊ condensate ဖြစ်ရင်း၊ အနေနဲ့ 'ငွေ့ရည်' စုဖွဲ့စဉ်၊ dissolved gas တွေဖြစ်တဲ့ oxygen နဲ့ တို့ဟာ အငွေ့ပျံသွားကြပါတယ်။ အချို့ boiler တွေမှာ၊ monitoring လုပ်နိုင်စေရန် Oxygen နဲ့ CO2 Analyzer တွေကို၊ permanently အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထားကြပြီး၊ Oxygen နဲ့ CO2 တို့ပါဝင်မှုကို အမြဲတမ်း၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးနေပါတယ်။ အကယ်၍ မြင့်မားနေပါက၊ boiler ရဲ့ blow down valve ကိုဖွင့်ချပြီး၊ steam ပမာဏအား လျှော့ချယူပါတယ်။
Fig. Timer controlled automatic bottom blowdown valve
boiler water drum မှာ လျှော့နည်းသွားတဲ့ 'ရေ' ကိုတော့ boiler make up water မှပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပြီးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သဘေ်ာတွေမှာ boiler make up water အဖြစ်၊ fresh water generator မှတဆင့်ရရှိလာတဲ့၊ sea distilled water ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တချို့ boiler တွေမှာ cascade tank အတွင်း Oxygen နဲ့ CO2 အား၊ ဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းအပြင် boiler ရဲ့ blow down valve ကို partially open အနေအထားဖြင့်၊ အနည်းငယ်ဖွင့်ထားပြီး၊ hot well အတွင်းသို့ 'steam' အဖြစ်၊ အဆက်မပြတ် blow down လုပ်ကာ၊ 'ရေ' အဖြစ်နဲ့ cascade tank သို့၊ ပြန်လည် ပေးပို့သလို၊ တချို့ boiler တွေမှာတော့ engine boom bilges အတွင်းသို့ steam အဖြစ်၊ အဆက်မပြတ် blow down လုပ်ကာ၊ လျှော့ချယူပါတယ်။
'Alkalinity' - boiler feed water အတွက်၊ အကောင်းဆုံး (pH) level ကတော့ (8.5 pH) ဖြစ်ပြီး၊ pH ပမာဏလျှော့နည်းသွားတဲ့အခါ၊ acid ဓါတ်တွေပိုများလာတဲ့အတွက်၊ boiler tubes တွေနဲ့ boiler ရဲ့ internal structure တွေမှာ၊ corrosion ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
Fig. Scaling Composition
ဒါ့အပြင် boiler water အတွင်း၊ acid ဓါတ်ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ အခါ corrosion သာမက၊ scaling တွေလည်း၊ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီး၊ alkalinity ဆိုတဲ့ pH level ကို၊ ထိမ်းညှိထားနိုင်ရန်၊ sodium phosphate soda ကို၊ ထည့်သွင်းရောစပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
'Hardness' - boiler feed water အတွင်း၊ calcium နဲ့ magnesium များ၊ မြင့်မားစွာပါဝင်နေခြင်းမှတဆင့် ပေါါပေါက်လာပြီး၊ hardness ကြောင့် boiler tubes တွေနဲ့ internal structure တွေမှာ၊ scaling တွေဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ 'Polymers 'အမျိုးအစား ဒါမှမဟုတ် carbonates နဲ့ phosphates တွေအသုံးပြုပြီး၊ scaling တွေကို၊ ဖယ်ရှားလေ့ရှိပါတယ်။
'Chlorine Content' - chlorine ကြောင့် boiler နဲ့ condenser မှ tube တွေပေါက်ပြီး၊ leak ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ 'salino meter' တတ်ဆင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် boiler feed water အတွင်း၊ chlorine ပါဝင်မှုကို၊ တိုင်းတာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ tube တွေပေါက်တဲ့အခါ၊ ယာယီ အသုံးပြုနိုင်ရန်၊ leak ဖြစ်ပေါါနေတဲ့ tube အား၊ plug in အနေနဲ့ blank လုပ်လေ့ရှိသလို၊ စုစုပေါင်း tubes အရည်အတွက်ရဲ့ (10 %) လောက်အထိသာ၊ blank အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့် ပါတယ်။
Reference and image credit to : Steam Engineering Tutorials